Frantsa : Fanahiana sy fanantenan’ny vondro-piarahamonina Japoney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Marsa 2011 4:40 GMT
Vakio amin'ny teny English, Shqip, Italiano, Español, 繁體中文, 简体中文, македонски, Français
Niteraka ahiahy tamin'ny ankamaroan'ny Japoney monina ivelan'ny tanindrazany, na izany eto Frantsa na any an-toeran-kafa, ny mahita sary mampihoronkoditra ny tsunami sy ny vaikany. Nanao izay hifandraisana amin'ny havany noho ny fisian'ny aterineto ry zareo ny tontolo andron'ny zoma 11 marsa. Ary avy amin'izany no tiany itondrany fampaherezana ireo mpiray tanindrazana aminy.
Hatramin'ny ora voalohany ny angidimbin'ny televizionam-panjakana NHK no nandefa mivantana ny fandrosoan'ilay onja mpandrava. Naverimberin'ny haino aman-jery frantsay ireny sary ireny, ka nahafahan'ny Japoney mifindra monina nanaraka mivantana ny fizotry ny toe-draharaha.
Tono Mariko, mpaka sary sady mpamaham-bolongana, no mitantara[teny japoney] ny naharaisany ny vaovao :
Notairin'ny imailaka frantsay namana iray aho.
Nanaraka ny vaovao aho hatramin'ny maraina.
Avy hatrany izy dia nitady izay hifandraisana tamin'ny fianakaviany noho ny fisian'ny aterineto :
Sarotra dia sarotra ny nahazoako ny fianakaviako tamin'ny sofindavitra fa reko ihany ry zareo.
Sarotra ny fahazoako vaovao rehefa ampitan-dranomasina aho. Saingy fantatro ankehitriny ny halehiben'ny fampiasana ny Twitter sy ny aterineto.
Mahatsiaro miraviravy tanana ny fiarahamonina japoney miatrika ny zavamisy rehefa lavitra ny tanindrazany.
Ao amin'ny bolongany ny japoney vavy manambady frantsay no maneho ny fanohanany, amin'ny alalan'ny fanaingoana sary voninkazo isan-karazany, mba hampihena kokoa ny herisetran'ny sary miseho amin'ny fahitalavitra, ao amin'ny lahatsoratra iray [teny japoney] izay manambara ny hamafin'ny fandraisana ny vaovao ny fahabangan'ny lohateny :
Tsy haiko ny teny na fihetsika entiko mampionona azy ireo.
Tsy mahita atao afa-tsy ny mivavaka aho hampahery an-dry zareo.
Raha mbola tsy tafala akory ny loza [teny frantsay] izany hoe ny ahiahy, dia miezaka ny somary misintaka kely ny sasany amin'ireo nifindra monina ka manontany sahady ny ho avin'ny firenena niavian-dry zareo.
Ao amin'ny lahatsora-pitsinjovana iray ny bolongan'i Konkatsu in the world no maminavina ny vokatry ny horohorontany tsara eo amin'ny fiarahamonina japoney :
“Oh ho faty aho” izany angamba no nolazain'ny olona maro. Rehefa misy ny trangan-javatra sahala amin'ireny vao miato ny olona ka manomboka mieritreritra. “Oadray, fa inona no andrasako amin'ny fiainako? Fa inona no nataoko hatramin'izay?” Mino aho fa tahaka izany ny fanontaniana mety hitranga, ary ny hafa mbola lasan-davitra kokoa noho ny mahazatra : “Mpiteraka fanahiana ny mipetra-drery, te-hiaramonina amin'olona iray aho”.
Ho an'ireo izay tsy mahery loatra ny fiantraikany, ny mponina any Tokyo no eritreretiko eto, dia zava-dehibe kokoa raha mba misy olona eo anilanao eo?
Ankoatra izany dia mitsitsy angovo ny Japoney amin'izay fotoana izao hiatrehana ny fahatapahan-jiro efa nolazaina mialoha. Raha vao nahita ny teny fanalahidy hoe “fahatapahan-jiro” aho dia hoy aho hoe ho maro indray ny zaza teraka atsy ho atsy…